Ukuzihlalisa ebusweni bombuthano
Indlu Izimpahla zasekhaya
Akukho lutho olungamdumaza owesifazane, kunokubukeka kwemibimbi yokuqala. I-cosmetology yanamuhla inikeza izindlela eziningi zokulwa nalesi sifo, okuphumelelayo kakhulu okuyilapho futhi kuhlala khona ukusikhipha. Kodwa uma ungeke ukwazi ukuthola izimonyo zezimonyo ngenhloso, khona-ke ukusikhipha ekhaya kungenziwa yiwo wonke umuntu. Futhi ukufeza umphumela omkhulu futhi ulondoloze ubuso obunzima ngesikhathi esifushane kuzosiza massager ekhethekile.
Ungakhetha kanjani i-massager ebusweni?
Ku-massager akangalimazi isikhumba esibucayi ebusweni, futhi waba yindindiso yangempela kanye nomlingani othembekile ekulondolozeni intsha , ngaphambi kokuthenga, bekungeke kube yinto engafanele ukukhokha ku-cosmetologist. Uchwepheshe uzokusiza ukunquma uhlobo lesikhumba futhi uzonikeza izincomo eziwusizo zokukhetha idivayisi. Futhi ngaphambi kwalolu hlobo izinhlobo ze-massagers ebusweni zizosiza tip:
I-brush-massager ebusweni iyoba ngumsizi obalulekile ekuphatheni kwezinqubo zokuhlanzeka kwansuku zonke. Ngesizo salo, ungakwazi ukuqeda kalula izinhlayiya zesikhumba esiyingozi futhi ugcine isikhumba sithinteka.
I-massage ye-Roller ilula, kodwa ngesikhathi esifanayo indlela ephumelelayo kakhulu yokuqinisa ubuso obomvu bese ulahla imibimbi emincane. I-massager enjalo ebusweni ingenziwa ngezinto ezihlukahlukene futhi ibe yipulasitiki, i-wood kanye ne-jade.
Vula i-massager - iphumelela kakhulu, kepha imangalisa kakhulu ngokuphepha kwezempilo, iyunithi. Iningi lokuphikisana, kufaka phakathi imivimbo, ukuqhuma nokuvuvukala.
I-ultrasonic massager - ilwa ngempumelelo nezizathu zokunciphisa ithoni yesikhumba ngokuyithinta ngamaza womvuthwandaba othile. Ngaphansi kwesenzo sabo, amangqamuzana esikhumba abonakala edansa, ehlehla futhi engenawo amandla, okuholela ekuthuthukiseni okujwayelekile esimweni sakhe.
I-massager engathintekile ebusweni - isetshenziselwa ikakhulukazi isikhumba esibucayi nesicwebezelayo eduze kwamehlo. Ngokuvamile kugcwaliswa ngezibhamu ezihlukahlukene, ukwandisa indawo yesicelo salo (intamo, ukunqamula izintambo, njll).
Imitha yesithathu yesigaba
Ukwakhiwa kwesethi yetiye
I-matress pad kwi-mattress yabantwana
Indlela yokukhetha umshini wokushisa - yini okufanele uyiqaphele lapho uthenga?
Amanzi e-lemon ukulahlekelwa isisindo - imithi
Ithebula lekhishi elincane
Izingubo zokuhlwa zasehlobo zase-2013
Einstein Museum, Volgograd
Izimo zokusebenza eziyingozi
I-Patau Syndrome - yini elindele abazali abazayo?
Amagundane angenayo iminwe - idayisi lezemidlalo elihle futhi elihle, lesikhumba esivuthayo nesikhumba
Amacici wokulahlekelwa isisindo
Isinkwa somntwana oneminyaka engu-1 ubudala
Amaphethini "wezinyawo zekhanda"
Indlela yokuthuthukisa i-clairvoyance?
Umbala we-Chestnut wezinwele
Bhalisela i-Google + Izibuyekezo ze-Google Play manje zisebenzisa i-Google + ngakho-ke kulula ukubona imicabango yabantu esuka kubantu obakhathalelayo
Imibala emibili 2013
Amasonto angu-8 ukubeletha - usayizi wesisu
Izakhiwo ze-Plasterboard ezinezandla